नार्कोनन सफलताको भिडियो - लिन्डा एस्.
म आफ्नो छोराको लागि मात्र बाँचेको थिए र उ निकै स्वस्थ थियो। उ असल परिवारमा हुर्केको थियो, चर्च जान थालेको थियो। ब्वाइ स्काउटमा थियो।
उसले कलेजका केही कक्षा पनि लियो यसैबीच उसले फेसा कमाउन आयल फिल्डमा काम गर्ने सोच बनायो। तसर्थ उ आयल रिगमा काम गर्न गयो। काम निकै गाह्रो थियो। आयल फिल्डमा नशालु पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो। उसले अलिकति गाँजा तान्यो जुन राम्रो होइन। अलिकति बियर पियो। एक वर्ष हुँदा नहुँदै मेथ प्रयोग गर्न थाल्यो। उसको व्यक्तित्वमा पूरै परिवर्तन देखेपछि हामीले त्यो कुराको चाल पायौं।
यो निकै लाजलाग्दो कुरा थियो। हामीले परिवारभित्रै गोप्य राख्ने कोसिस गयौं। म हरेक रात रून्थे। अदालतमा काम गर्दा जतिबेला पनि न्यायाधीश आए जस्तो लाग्थ्यो, मेरो सास रोकिन्थ्यो, मलाईं यस्तो लाग्थ्यो "कतै उहाँ केलन पक्राउ भएको खबर सुनाउन आउनुभएको होइन?"
उसमाथि लागू औषध प्रयोगको आरोप त कहिल्यै लागेन तर धेरै पटक पक्राउ हुनबाट बच्यो। कि त मारिन्थ्यो, नभए समातिएर जेल जान्थ्यो। मतलब, मलाईं लागुऔषधकै नशामा उसले आत्महत्या गर्छ कि भन्ने डर थियो।
त्यसकारण म चिन्तित भएर इन्टरनेटमा खोज्न थाले। त्यही क्रममा नार्कोननको बारेमा थाहा पाए। मैले नार्कोननमा फोन गरे, उसलाई त्यहाँ लैजान त्यहाँका कर्मचारी पाँच हप्ता मसँग बसे।
अनि केही दिनमै त हामीले परिवर्तन देख्न थालिहाल्यौं नि! मैले उसलाई प्रोत्साहित गरिरहे, हामीले उसमा परिवर्तन देख्न थालिसकेका थियौं। उसले पनि “आमा यो काम मैले तपाईंका लागि मात्र नभएर आफ्नै लागि गरिरहेको छुँ” भन्न थाल्यो।
मैले आफ्नो छोरा र नार्कोननमा भेटेका कर्मचारीलाई देख्दा मलाईं उनीहरूले कहिल्यै पनि लागुऔषधको समस्या रहेको होला भन्ने जस्तो लाग्दैन। यो नै यो कार्यक्रम कति राम्रो थियो भन्ने प्रमाण हो।
यो त चमत्कार नै थियो। हामीले हाम्रो छोरा फिर्ता पाएका छौं। मैले नार्कोननलाई जति धन्यवाद दिए पनि कम पर्छ किनभने उनीहरूले उसको जीवन बचाए, खासमा हाम्रो जीवन पनि।
नार्कोनन ग्रेजुएटकी दिदी
© 2020 नार्कोनन एरोहेड . सर्वाधिकार सुरक्षित। • अनलाईन गोपनीयता सूचना • प्रयोग सर्तहरू • गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना • अस्वीकृति: व्यक्तिगत परिणामहरूको कुनै गारन्टी गरिएको छैन र यो व्यक्ति अनुसार भिन्न हुन सक्छ।